Ànọ M Ndụ Eme Gịnị?​—Ihe Nwere Ike Ịgbanwe
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Oromo Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
“A na-akpagide anyị n’ụzọ niile, ma a kpagideghị anyị nke na anyị enweghị ike imegharị ahụ́; anyị na-enwe mgbagwoju anya, ma ọ bụghị n’enwetụghị ụzọ mgbapụ.”—2 NDỊ KỌRỊNT 4:8.
Ụfọdụ ndị na-ekwu na mmadụ igbu onwe ya maka na nsogbu karịrị ya bịaara ya dị ka ebe mmadụ chọrọ igbupụ isi ya maka na isi na-awa ya. Ọ bụrụgodị na i chere na o nwekataghị ka nsogbu tara ezigbo akpụ hapụ gị aka, ihe nwere ike ịgbanwe mgbe ị na-atụghị anya ya.—Gụọ igbe bụ́ “Ihe Mechara Dịrị Ha Mma.”
Ọ bụrụgodị na ihe agbanweghị, ọ bụghị ichegbu onwe gị ga-ebi ya. Were ụbọchị ọ bụla otú i si hụ ya. Chetakwa na Jizọs sịrị: “Unu echegbula onwe unu mgbe ọ bụla maka echi, n’ihi na echi ga-enwe nchegbu nke ya. Ihe ọjọọ nke ụbọchị nke ọ bụla ezuworo ya.”—Matiu 6:34.
Olee ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ bụ nke o nweghị ihe ị ga-emeli ka o bie? Dị ka ihe atụ, gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa na-enweghị ngwọta, ma ọ bụkwanụ na gị na di gị ma ọ bụ nwunye gị etisaala, ma ọ bụdị na onye gị nwụrụ?
Ọ sọkwa ya ya dịrị otú ahụ, a ka nwere ihe ị ga-agbanweli. Ị ga-agbanweli otú i si ele nsogbu ahụ anya. Ọ bụrụ na i were ụwa otú i si hụ ya, obi agaghị na-adị gị njọ nke otú ahụ. (Ilu 15:15) Kama ịchọwa ụzọ igbu onwe gị, ihe ị ga na-achọ bụ ụzọ ị ga-esi die ihe bịaara gị. Ò nwere uru ime otú a ga-abara gị? Ee, ọ ga-eme ka ị ghara ịna-eche na e nweghị ihe ọzọ ga-ebi nsogbu gị ma e wepụ ọnwụ.—Job 2:10.
IHE Ị GA-EBURU N’UCHE: Nwayọọ nwayọọ ka e ji aracha ofe dị ọkụ. Nsogbu ọ bụla bịaara gị ga-emecha gafere, ya sọkwa ya ya hara ka elu na ala.
IHE I NWERE IKE IME: Kọtatụrụ nwanne gị ma ọ bụ enyi gị nsogbu gị na ya na-alụ. Onye ahụ nwere ike tụọrọ gị aro ndị ga-enyere gị aka ịgbanwe otú i si ele nsogbu ahụ anya.—Ilu 11:14.
IHE MECHARA DỊRỊ HA MMA
E nwere mmadụ anọ a kọrọ akụkọ ha na Baịbụl. Ha ji obi ha niile jeere Chineke ozi. Ma, e nwere mgbe nsogbu bịara karịa ha, ha achọọkwa ịnwụ. Legodị ihe ha kwuru:
Ribeka: “Ọ bụrụ otú a ka ọ dị, gịnị medịrị m ji dịrị ndụ?”—Jenesis 25:22.
Mozis: “Biko, gbuo m ka m nwụọ. . . . ka m ghara ịhụ ọdachi ga-adakwasị m.”—Ọnụ Ọgụgụ 11:15.
Ịlaịja: “Wepụ mkpụrụ obi m, n’ihi na akaghị m nna nna m hà mma.”—1 Ndị Eze 19:4.
Job: “Gịnị mere ekubighị m ume ozugbo m pụtasịrị n’afọ?”—Job 3:11.
Ọ bụrụ na ị gụọ ihe Baịbụl kwuru banyere mmadụ anọ a, ị ga-achọpụta na ihe mechakwara dịrị ha mma otú ha na-atụghịdị anya ya. Ihe nwere ike mechaa gbanweere gị echi. (Ekliziastis 11:6) Obi adala gị mbà.
E nwere ihe atọ ga-enyere gị aka ịna-edi nsogbu gị.
Ànọ M Ndụ Eme Gịnị?—Ihe Nwere Ike Ịgbanwe
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Ihe Ị Ga-eme ma A Dụọ Gị Ọdụ
ISIOKWU TETA! A Ànọ M Ndụ Eme Gịnị?
ISIOKWU TETA! A Ihe Nwere Ike Ịgbanwe
ISIOKWU TETA! A Enyemaka Dị
ISIOKWU TETA! A Olileanya Dị
THE BIBLE'S VIEWPOINT Ego
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Ị Hụwa Ihe Ị Na-atụghị Anya Ya n’Ebe Di Gị Nọ
THE BIBLE'S VIEWPOINT Ịkpa Ókè Agbụrụ
WAS IT DESIGNED? Ahụ́ Agwọ